Akhriso : Xaaladihii Ugu Dambeeyey Dibadbaxyada Ruxay Magaalada Minneapolis Ee Mareykanka. – Goobjoog News
Bannaanbaxyo rabshado watay ayaa habeenkii saddexaad oo xiriir ah ka dhacay gobolka Minnesota ee wadanka Maraykanka kaas oo ka dhashay caro shacabka magalaada ay ka qaadeen wiil American Modow ah oo askar Booliska magaalada ay u dileen si Banii’adnimada ka baxsan waxaana ka dhashay dibaxyo ruxay magaalada.
Dibadbaxan oo watay rabshado ay sameynayaan mudaharaadayaasha ayaa habeenkii xalay sii xoogeystay kaas gilgilay magaalada Minneapolis, halkaas oo ay iskula dhaceen, ciidamada booliska iyo dadka ka careysan dilka Goerge Floyd oo maalinimadii Isniinta ahaa ku baxay gacanta Booliska.
Dibadbaxayaasha ka careysan dilka ninka ayaana habeenimadii xalay gubay goobo badan uu ka mid ahaa Bank ku yallo magaalada kaas oo ka mid ahaa goobo dab la qabad siiyey dibad baxa ayaana sii soconaya kuna sii baahayo qeybaha kale magaalada sida ay soo sheegayaan wariyayaasha ku sugan goobaha ay ka socdaan dibadbaxyada.
Maamulka magaala oo isku dayey inuu xakameeyo dibadbaxayaasha ayaa shaqada ka joojiyey booliska markii ay u maaro waareen dibadbaxayaasha ayaa waxaa magaalada lagu soo daadiyey ku dhowaad 500 askarta Milatariga keydka wadanka Mareykanka kuwaas oo loo tababaray in ay ka hortagaan rabshada nuucaan oo kale ah waxaana ay u muuqanaya in ay ku guul dareysteen in ay xakameeyaan dibabaxa oo abuuray jahwareer amni ee magaalada.
Intii dibad baxyadu ay socdeen waxaa la gubay saldhigii magaalada, waxaa sidoo kale dab la qabadsiiyey goobo ganacsi oo ay lahaayeen dad American ah iyo Ajaanib deganaa Mareykanka oo ay ku jireen kuwo ay lahaayeen muwaadiniin Soomaaliyeed, goobaha qaarkood ayaana weli gubanaayo dibadbaxa ayaa ku baahayo goobo kale.
Waxaa jira dhallinyaro Sooaaliyeed kuwaas oo iskood isku xilqaamay kuwaas habeenkii sedexaad badbaadinaya goobahooda Ganacsiga oo ka hor istaagaya dibaxayaasha doonaya inn ay gubaan goobaha ganacsiga magaalada waxaana ay VOA u sheegeen in ay jiraan dad ku dhex gabaanayo dibadbaxayaasha oo doonaya in ay wax dhacaan oo ay goobahana gubaan sida ay sheegeen dhallinyadaan oo habeenkii sedexaad badbaadinaya ganacsiyadooda.
Dibad baxa ayaa sii saro kacay ka dib markii ciidamu ay xireen wariye ka tirsanaa CNNtv kaas oo goobta uu ku sugnaa maalmaahaan tabimnaayey live ku aadan dibadbaxa oo maalmaahan shaashadaha CNNTV Omar Jimenez ayaa gacmaha laga jeebbeeyey isaga oo subaxa hore ee jimcaha tebin toos ah ku jira sida ay wax uga jiren goobta.
Waxaa sida oo kale la xiray sawir qaade iyo soo saare la socday iyada oo xariggiisa loo sababeeyey inuu diiday amarka booliska ay siiyeen ee ahaa inuu meesha ka dhaqaaqo Balse wax yar kaddib ayaa la sii daayey wariyaha iyo raggi lalal xiray iyada oo aan wax dacwad ah lagu soo oogin wariyaha iyo saaxiibadiisa ka tirsanaa CCNTV.
Barasaabka Minnesota Tim Walz ayaa raalli gelin ka bixiyey xarigga wariyaha lagula kacay, isaga oo dhacdada ku tilmaamay waxaana uu dalbaday in deganaan la muujiyo lana soo afjaro dibad baxayaasha ,maamulka CNN waxay sheegtay xariigga loo geystay shaqaalaheeda inuu dastuurka dalka Mareykanka uu ka hor imanayo.